Digirta Asparagus waa dhaqan ka mid ah qoyska legume ee ka tirsan noocyada sonkorta. Digirta Asparagus waxay leeyihiin magacyo kale, sida cagaar, cagaar ama sonkor. Waxaa jira in ka badan 90 nooc oo dhaqanka ah, oo ka duwan wakhtiga ubax iyo qaabka inflorescences. In digirta digirta asparagus ma jiro lakamid madow, kaas oo u oggolaanaya inuu cuno dhammaan boogta oo dhan.
Noocyada ugu fiican ee digirta asparagus (magacyada iyo sawirrada)
Ka mid ah qoyska khudradda cagaaran ee dabiiciga ah, digirta si kalsooni leh ayaa ku jira noocyada ugu horreeya ee aqoonsiga iyo beerashada. Laakiin digirta asparagus, noocyo kuwaas oo nagu siiyaan dhadhan fiican ee cuntada iyo abuuritaanka raaxo ah aesthetic ee qurxinta xagaaga, yar yar oo hadhuudh. Dhanka kale, doorashada waa mid aad u ballaaran, waana in si taxadar leh loo qaadaa.
Beeraha dhirta 'Vigna Asparagus' - Noocyada beeraha
Bannaanka u jecel inay tijaabiyaan, iyo inta badan sariiraha u muuqdaan dhir aan caadi ahayn indhahayaga. Mid ka mid ah kuwan "shisheeyaha" - viva bean khudradda ah, waxaan kuu sheegi doonaa. Vigna khudradda: Tilmaamid Tani waa warshad of legume qoyska. Sidoo kale loo yaqaano digirta. Waxay u kori kartaa sida geed ama nus-caleen, laakiin noocyada ugu badan ayaa horumariya sida fuulitaanka.
Cunnooyinka soo go'aya digirta asparagus ee jiilaalka
Faa'iidada fiitamiinada iyo macdanta, halbeegga digirta asparagus, oo ay weheliyaan waxoogaa calorie ah - waa sirta ugu weyn ee caan ku ah caanaha. Noocyo kala duwan ayaa la diyaarin karaa iyada oo aan lahayn xirfado khaas ah kariska iyo waqti-qaadashada. Waa ku filan in lagu daro dhawr dhibcood oo saliid ah gabbaldayaha iyo milixda digirta la kariyey - cuntada cuntada ee dumarka waa diyaar.
Sida loo koro digirta asparagus ee dalka
Macluumaadka ku saabsan sida loo koro digirta caadiga ah lama yaabi doono deegaan xagaaga ah, oo aan lagu sheegi karin digirta asparagus, taas oo kaliya heleysa caan ah oo waxay bilaabeysaa in ay degto meelaheeda beeraha Bariga Yurub. Sidaa daraadeed, aan fahamno sida loo abuuro digirta asparagus ee dhulka, waa in daryeelka la qaato iyo sida looga ilaaliyo cayayaanka.